योगा सिक्न आएकी अमेरिकनसँग सम्बन्ध, प्रहरीमा उजुरीपछि खुल्यो थप रहस्य !:: Naya Nepal
योगा सिक्न आएकी अमेरिकनसँग सम्बन्ध, प्रहरीमा उजुरीपछि खुल्यो थप रहस्य !
काठमाडौं । एक विदेशी महिलामाथि गलत काम गरेको खुल्न आएको छ । भारत, नेपाललगायत देशहरुमा महिलामाथि हुने गलत कार्यहरुका घटनाहरू दैनिक बढ्दैछन् । यो बीचमा विदेशी पाहुनालाई पनि शिकार बनाउन थालेको खबर बाहिर आएको छ ।
पछिल्लो घटना भारत ऋषिकेशको हो, त्यहाँ विदेशी महिलामाथि गलत काम गरेको घटना बाहिर आएको छ । उत्तराखन्ड प्रहरीले भनेको छ कि एक ३७ वर्षीया अमेरिकी महिला योग सिक्ने भन्दै ऋषिकेशमा बस्दै आएकी थिइन् । यसैबीच एक स्थानीय बासिन्दाले उनलाई योग सिकाउने बहानामा धेरैपटक उनको अनिच्छाका बीच पनि स’म्बन्ध राखेका हुन् ।
मुनिको रेती चौकी इन्चार्ज आरके सकलानीले भने कि पीडितले दर्ता गरेको उजुरीमा ऋषिकेश निवासी अभिनव रोय ५ अक्टूबरमा बलपूर्वक झ्यालबाट महिलाको कोठामा छिरेका थिए र उनीसँग स’म्बन्ध कायम गरेका थिए । प्रहरी अधिकारीले पीडित महिलाले दिएको बयानका आधारमा यसभन्दा पहिले पनि आरोपीले अमेरिकी महिलालाई योग पढाइको बहानामा उनको फ्ल्याटमा धेरै पटक बोलाएर स’म्बन्ध राखेको आरोप लागेको छ । ति महिलाले प्रहरीलाई बताइन् कि उनी योगाको लागि आरोपीको नजिक आईपुगेकी थिइन् ।
प्रहरीका अनुसार विदेशी महिलाले उजुरीमा यसो पनि भनेकी छन् कि आरोपित अभिनवका बुबाले पीडितलाई मुद्दा फिर्ता लिन दवाव दिएका छन् । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि कुनै राज्य त्यस्तो छैन जहाँबाट महिलामाथि गलत काम नभएको हो । हालै उत्तर प्रदेशको हाथरस र बलरामपुरमा दलित केटीहरू भएको त्यो घटनापछि मृत्यु भएको समाचार पनि हालै बाहिर आएका थिए । अतिथीलाई भगवान मान्ने भारतीय संस्कृति अनुसार विदेशी अतिथिहरूमाथि यतिसम्म भएको खबरले सिंगो भारत लज्जीत बन्नु परेको छ ।
विषय प्रहरीकोमा पुगेपछि महिलाले ना’शायुक्तप’दार्थ सेवनका लागि उनी ती व्यक्तिसँग आएको खुलाएकी छिन् । ना’शाको सु’रमा सुरुमा त जे–जे भयो स्वीकारेको तरपनि इच्छा विपरितपनि थालेपछि आफुले उजुरी दिन बाध्य भएको बताएकी छिन् । त्यसपछि त्यी पुरुषमाथी अब ना’शायुक्तपदा’र्थ किनबेचको मुद्धापनि लगाइएको छ ।
भारतमा आज दुई फरक–फरक ठाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का
काठमाडौं । आज बिहानै जोडदार भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । शुक्रबार भारतका दुई फरक–फरक ठाउँमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । भूकम्पले हिमाचल प्रदेश र मणिपुरका हल्लाएको जनाइएको छ । झन्डै आधा घण्टाको अन्तरालमा हिमाचल प्रदेशको लाहौल–स्पीतिमा पहिले भूकम्प गयो र त्यसपछि मणिपुरको कामजोङ्गमा ठूलो भूकम्पको अनुभव गरियो ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार हिमाचल प्रदेशको लाहौल–स्पीति क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान ३ बजे आसपास भूकम्प गयो । भूकम्पको मापन ३.३ रेक्टर स्केलमा गरिएको छ । यद्यपि यसले कुनै पनि जनधनको क्षति भने नभएको बताइएको छ ।
त्यसको लगत्तै शुक्रबार बिहान साढे ३ बजे नजिक ३.४ रेक्टर स्केल परिमाणको भूकम्पले मणिपुरको कामजोङ्गमा धक्का दियो । यसको गहिराई १० किलोमिटर थियो । राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रले यसको बारेमा जानकारी दियो ।
यद्यपि यस भूकम्पमा पनि कुनै हताहत वा अन्य कुनै क्षतिको खबर छैन । यसभन्दा पहिले बुधवार, मणिपुरको उखरुल जिल्लामा ४.३ रेक्टर ।स्केल परिमाणको भूकम्प गएको थियो । उही समयमा, सेप्टेम्बर १ मा पनि त्यहि क्षेत्रमा ५.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।